Gacan-siin - BBC Somali
Sidee u suntadaa BBC Mobile?
Suntashadu waxay kuu kaydisaa baraha aad jeceshahay si ay kuugu sahlanaato inaad mar kale booqatid. Marka aad isticmaalaysid BBC Mobile dooro ‘Bookmark', ‘Add bookbark' ama ‘Favourites' oo laga helo menu-ga telefoonkaaga. Si aad toos ugu tagtid BBC Mobile, menu ka dooro 'Bookmarks' ama 'Favourites'. Si aad faahfaahin kale oo ku saabsan suntashada aad u hesho, eeg buugga la socda Mobile-kaaga.
BBC Mobile xaggee laga helaa?
Cinwaanka BBC Mobile waa http://www.bbcsomali.com/mobile
Cinwaankaas kuge keyedso ‘bookmarks/Favorites' si aanad ugu baahan in aad dib u garaacdo, mar kasta oo aad barta soo booqato.
Isticmaalka BBC Mobile muxuu iigu kacayaa?
BBC kuguma soo dallacayso isticmaalka wararkeeda. Si kastaba ha ahaatee, sharikadda telefoonkaaga ayaa laga yaabaa in ay kugu soo dallacdo adeegga aad ka isticmaashid. Haddii aadan hubin sicirka adeegga, la xiriir sharikadda telefoonkaaga.
Waxaa jira labo siyaabood oo loo xaddido qiimaha uu kuugu kacayo in aad mobile-ka ku siticmaasho internet-ka.
-Qaado macluumaad jumlo ah. Haddii aad saxiixdo heshiis bishii ama maalintii aad qiime go'an bixinaysid waxaad xadddidi doonta kharash-ka bil walba kaaga baxa adeegsiga internet-ka mobile-ka, weliba haddii aad tahay qof si aad ah u isticmaala. kala xiriir shabakaddaada telefoonka wixii tafaasiil dheeraad ah.
- Adeegso Wi-Fi. Tiro sii kordhaysa oo ka mid ah telefoonnada mobile-ka waxay hadda ku yimaaddan iyagoo wata Wi-Fi ku dhex samaysan. waad dhimi kartaa qiimaha adeeggu kuugu kacayo adigoo gelaya BBC Somali Mobile sidatan, waxaad ka gelaysaa broadband-ka gurigaada ee aan fiilada lahayn ama meel kale oo calaamadda aan fiilada lahayn ay ka jirto. haddii aadan hubin in telefoonkaadu uu leeyahay Wi-Fi, la xiriir warshaddii telefoonka samaysay ama sharikadda telefoonkaada.
Sidee baan BBC ula xiriiraa?
Waan soo dhoweynaynaa wixii jawaab ka yimaad adeegyada mobile-ka. Fadlan ogsoonow kama jawaabi karno dhammaan farriimaha na soo gaara. Ra'yi, wax weydiin ama talo soo jeedin waxaad email ugu soo diri kartaa: somali@bbc.co.uk Fadlan ogow in cinwaadkan email-ka uu yahay mid loogu talo galay wixii jawaab ka timaad adeegga mobile-ka BBC.
Maxay BBC ka qabtaa xiriirinta baro kale?
Marka ay ku habboon tahay, www.bbcsomali.com/mobile waxaa lagu soo daraa xiriiriyeyaal aan BBC ahayn. Baraha kale uma xiriirinno in aan ka helno lacag, adeeg ama badeecad. Dhammaan xiriirrada baraha kale ee ku jira BBC waa kuwo ku habboon bogga lagu daabacay, una cuntama dadka isticmaala www.bbcsomali.com/mobile waxaa loogu talo galay inay noqdaan kuwo ku habboon waxa ku jira bogga ay ku xiriirsan yihiin iyo inay u cuntamaan dadka la filayo inay dhegaystaan.
BBC mas'uul kama ahan waxyaabaha ku jira barahan, inkasta oo si joogto ah loo hubiyo in barahaas ay yihiin kuwo weli khuseeya bogga ay ku xiriirsan yihiin. Xiriirinta baro kale yaan loo macnaysan ansixin.
BBC way soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee ku saabsan xiriirinta baraha kale. Haddii aad doonaysid inaad wax ka dhahdid, fadlan nala soo xiriir.
Sidee ku heli karaa faahfaahin kale oo ku saabsan BBC Mobile?
Dhag sii xiriiriyeyaasha soo socda si aad u hesho tafaasiil hor leh oo af Ingiriis ah oo ku saabsan Shuruudaha Isticmaalka iyo Siyaasaddeenna Xafidaadda Xogta.